. . .ကနေဒါက ခြေတစ်ဖက်နဲ့သူရဲကောင်း အပြေးသမားလေး. . . - Barnyar Barnyar - NEW
. . .ကနေဒါက ခြေတစ်ဖက်နဲ့သူရဲကောင်း အပြေးသမားလေး. . .
Aung Aung · Posted on January 5, 2021 January 5, 2021
Terry Fox ကို ကနေဒါနိုင်ငံ မနီတိုဗားပြည်နယ် ဝင်နီပက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက အားကစားမှာထူးချွန်ပြီး ကျောင်းသားဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဘတ်စကတ်ဘော အားကစားသမား ၊ မာရသွန်အပြေးသမား ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာမှာ ဆုတံဆိပ်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Terry အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့မှာ အရိုးကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နေတာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ခြေထောက်တစ်ဖက်ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့တာကြောင့် ဝှီးချဲပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားကစားကိုချစ်တဲ့ Terry ဟာ ဝှီးချဲနဲ့အတူ ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကင်ဆာဟာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ခုနှစ်မှာတော့ Terry ရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဒူးခေါင်းအပေါ်ဘက် ၆လက်မခန့်အထိ ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ခြေအတုတစ်ဖက်တပ်ကာ အားကစားကို ဆက်လုပ်နေခဲ့ပြီး ဝှီးချဲဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲမှာလည်း နိုင်ငံအတွက် ချန်ပီယံဆု ၃ခုကိုလည်း ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Terry Fox ရဲ့ ခြေတုကို ထိမ်းသိမ်းပြသထား
ဆေးရုံတက်နေစဉ်အတွင်းမှာ Terry ဟာ များပြားလှစွာသော ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေရောဂါခံစားနေရတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက အများစုဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Terry ဟာ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ နဲ့ ကင်ဆာသုတေသနအတွက် ကနေဒါနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြေးပြီး ရန်ပုံငွေရှာဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြေးမယ့်ခရီးကို မျှော်လင့်ချက်မာရသွန်(Marathon of Hope)လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြေးပွဲအတွက် ကနေဒါတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူပေါင်း ၂၄သန်းကို ၁ယောက် ၁ဒေါ်လာစီထည့်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ အသက်၂၁နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Terry ဟာ ၁၉၈၀ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ရက်နေ့မှာ ခြေတုတပ်ပြီး စပြေးခဲ့ပါတယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အလွန်နာကျင်ပေမယ့် ဒီနာကျင်မှုဟာ Terry ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့ လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားသလောက် ရန်ပုံငွေမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ၊ လုပ်ငန်းရှင်များကပါ စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး သူပြေးတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အလှူငွေများထည့်ဝင်လာကြပါတယ်။
ဗစ်တိုးရီးယားက Terry Fox ရုပ်တု
သူဟာ ကနေဒါရဲ့ အတ္တလန်တစ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ကွီးဘက် နဲ့ အွန်တေရီယိုဒေသတွေကို ဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၆မိုင်နှုန်းနဲ့ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ Terry ဟာ အွန်တေရီယိုရဲ့ Thunder ပင်လယ်အော်အရောက်မှာတော့ မခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်လာတဲ့အတွက် ပြေးခြင်းကို ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ကင်ဆာပိုးဟာ အဆုတ်အထိပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာရက်ပေါင်း ၁၄၃ရက်ပြေးခဲ့ပြီး မိုင်ပေါင်း ၃၃၃၉မိုင် ခရီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မပြီးသေးတဲ့သူ့ရဲ့ခရီးကို အကြိမ်ကြိမ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ရောဂါဟာပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး ၉လအကြာ ၁၉၈၁ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့ မှာတော့ Terry သေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။
Terry foxျေပးခဲ့ရာလမ်းကြောင်း
Thunder Bay အရောက် ဆက်မပြေးနိုင်တော့
ကနေဒါအစိုးရက Terry ရဲ့ သူရဲကောင်းဆန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ၁ဒေါ်လာ ငွေဒင်္ဂါးမှာ Terry ရဲ့ရုပ်ပုံကိုထည့်သွင်းပြီး သွန်းလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် အားလုံးဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက အစိုးရရုံးတွေ အလံတစ်ဝက်ချပေးခဲ့ပါတယ်။ the Order of Canada ဆိုတဲ့ ကနေဒါရဲ့ အမြင့်ဆုံးဆုကိုလည်း ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Marathon of Hope ပြေးပွဲကနေ ဒေါ်လာ ၂၄သန်း ရရှိခဲ့ပြီး ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Terry Fox Run ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ မာရသွန်ပြေးပွဲကို ကနေဒါမှာ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ကျော်က လူပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ သူ့နာမည်နဲ့ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဟာ ဒေါ်လာ သန်း၇၅၀ အထိ အလှူငွေတွေရရှိခဲ့ပြီး ကင်ဆာသုတေသန နဲ့ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်များကို ထောက်ပံ့နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်တွေကိုတော့ လူငယ်လေးဟာ မြင်တွေ့ မသွား လိုက်ရရှာပါဘူး။
ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ လူတွေကို သိစေချင်ရုံလေးပါ။ အိပ်မက်ဆိုတာ ကြိုးစားပြီး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှသာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာပါ။ ကျွန်တော့်လိုလူကတောင် လုပ်နိုင်သေးရင် ခင်ဗျားက ပိုလုပ်နိုင်ရမှာပေါ့။
ကနဒေါက ခွတေဈဖကျနဲ့ သူရဲကောငျး အပွေးသမားလေး
Terry Fox ကို ကနဒေါနိုငျငံ မနီတိုဗားပွညျနယျ ဝငျနီပကျမွို့မှာမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ ငယျစဉျကတညျးက အားကစားမှာထူးခြှနျပွီး ကြောငျးသားဘဝတဈလြှောကျလုံး ဘတျစကတျဘော အားကစားသမား ၊ မာရသှနျအပွေးသမား ဖွဈခဲ့ပွီးပွိုငျပှဲပေါငျးမြားစှာမှာ ဆုတံဆိပျတှရေရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Terry အသကျ ၁၈နှဈအရှယျရောကျတဲ့အခါမှာတော့ သူ့မှာ အရိုးကငျဆာ ရောဂါဖွဈနတောကို စဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။
ခွထေောကျတဈဖကျကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျတော့တာကွောငျ့ ဝှီးခြဲပျေါရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားကစားကိုခဈြတဲ့ Terry ဟာ ဝှီးခြဲနဲ့အတူ ဘတျစကတျဘောပွိုငျပှဲ ဝငျပွိုငျခဲ့ပါသေးတယျ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကငျဆာဟာ ပိုမိုဆိုးရှားလာခဲ့ပွီး ၁၉၇၇ခုနှဈမှာတော့ Terry ရဲ့ ညာဘကျခွထေောကျကို ဒူးခေါငျးအပျေါဘကျ ၆လကျမခနျ့အထိ ဖွတျပဈခဲ့ရပါတယျ။ ခွအေတုတဈဖကျတပျကာ အားကစားကို ဆကျလုပျနခေဲ့ပွီး ဝှီးခြဲဘတျစကတျဘောပွိုငျပှဲမှာလညျး နိုငျငံအတှကျ ခနျြပီယံဆု ၃ခုကိုလညျး ရရှိအောငျစှမျးဆောငျပေးခဲ့ပါသေးတယျ။
Terry Fox ရဲ့ ခွတေုကို ထိမျးသိမျးပွသထား
ဆေးရုံတကျနစေဉျအတှငျးမှာ Terry ဟာ မြားပွားလှစှာသော ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှရေောဂါခံစားနရေတာကို တှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီထဲက အမြားစုဟာ ငယျရှယျတဲ့ကလေးငယျတှဖွေဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Terry ဟာ ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှကေိုထောကျပံ့နိုငျဖို့ နဲ့ ကငျဆာသုတသေနအတှကျ ကနဒေါနိုငျငံကိုဖွတျပွေးပွီး ရနျပုံငှရှောဖို့ စိတျကူးခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ပွေးမယျ့ခရီးကို မြှျောလငျ့ခကျြမာရသှနျ(Marathon of Hope)လို့ အမညျပေးခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ပွေးပှဲအတှကျ ကနဒေါတဈနိုငျငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူပေါငျး ၂၄သနျးကို ၁ယောကျ ၁ဒျေါလာစီထညျ့ဖို့ တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
အဲဒီနောကျတော့ အသကျ၂၁နှဈအရှယျသာရှိသေးတဲ့ Terry ဟာ ၁၉၈၀ခုနှဈ ဧပွီလ ၁၂ရကျနမှေ့ာ ခွတေုတပျပွီး စပွေးခဲ့ပါတယျ။ ခွထေောကျတဈဖကျတညျးနဲ့ အလှနျနာကငျြပမေယျ့ ဒီနာကငျြမှုဟာ Terry ရဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုကို မတားဆီးနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အစပိုငျးမှာတော့ လူစိတျဝငျစားမှုနညျးတဲ့အတှကျ မြှျောလငျ့ထားသလောကျ ရနျပုံငှမေရှာနိုငျခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ တဖွညျးဖွညျးလူသိမြားလာခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား ၊ လုပျငနျးရှငျမြားကပါ စိတျဝငျစားလာကွပွီး သူပွေးတဲ့လမျးတဈလြှောကျမှာ အလှူငှမြေားထညျ့ဝငျလာကွပါတယျ။
ဗဈတိုးရီးယားက Terry Fox ရုပျတု
သူဟာ ကနဒေါရဲ့ အတ်တလနျတဈဒသေတှဖွေဈတဲ့ ကှီးဘကျ နဲ့ အှနျတရေီယိုဒသေတှကေို ဖွတျပေးခဲ့ပါတယျ။ တဈနကေို့ ၂၆မိုငျနှုနျးနဲ့ပွေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စကျတငျဘာလ ၁ရကျနေ့ Terry ဟာ အှနျတရေီယိုရဲ့ Thunder ပငျလယျအျောအရောကျမှာတော့ မခံမရပျနိုငျအောငျနာကငျြလာတဲ့အတှကျ ပွေးခွငျးကို ရပျတနျ့ခဲ့ရပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ သူ့ရဲ့ကငျဆာပိုးဟာ အဆုတျအထိပြံ့နှံ့သှားပွီဖွဈပါတယျ။ သူဟာရကျပေါငျး ၁၄၃ရကျပွေးခဲ့ပွီး မိုငျပေါငျး ၃၃၃၉မိုငျ ခရီးကိုရောကျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ မပွီးသေးတဲ့သူ့ရဲ့ခရီးကို အကွိမျကွိမျဆကျဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ရောဂါဟာပိုမိုဆိုးရှားလာခဲ့ပွီး ၉လအကွာ ၁၉၈၁ခုနှဈ ဇှနျလ ၂၈ရကျနေ့ မှာတော့ Terry သဆေုံးခဲ့တဲ့အတှကျ တဈနိုငျငံလုံးဝမျးနညျးခဲ့ရပါတယျ။
Terry fox ပြေးခဲ့ရာလမျးကွောငျး
Thunder Bay အရောကျ ဆကျမပွေးနိုငျတော့
ကနဒေါအစိုးရက Terry ရဲ့ သူရဲကောငျးဆနျတဲ့လုပျဆောငျခကျြကွောငျ့ ၁ဒျေါလာ ငှဒေင်ျဂါးမှာ Terry ရဲ့ရုပျပုံကိုထညျ့သှငျးပွီး သှနျးလုပျစခေဲ့ပါတယျ။ သဆေုံးသှားတဲ့အတှကျ အားလုံးဝမျးနညျးခွငျးအထိမျးအမှတျအနနေဲ့ တဈနိုငျငံလုံးက အစိုးရရုံးတှေ အလံတဈဝကျခပြေးခဲ့ပါတယျ။ the Order of Canada ဆိုတဲ့ ကနဒေါရဲ့ အမွငျ့ဆုံးဆုကိုလညျး ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Marathon of Hope ပွေးပှဲကနေ ဒျေါလာ ၂၄သနျး ရရှိခဲ့ပွီး ကငျဆာဖောငျဒေးရှငျးအတှကျ ထောကျပံ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူ့ကိုဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ Terry Fox Run ဆိုတဲ့အမညျနဲ့ မာရသှနျပွေးပှဲကို ကနဒေါမှာ ကငျြးပပေးခဲ့ပွီး နိုငျငံပေါငျး ၆၀ကြျောက လူပေါငျးမြားစှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွပါတယျ။ ၂၀၁၈ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ သူ့နာမညျနဲ့ ကငျဆာဖောငျဒေးရှငျးဟာ ဒျေါလာ သနျး၇၅၀ အထိ အလှူငှတှေရေရှိခဲ့ပွီး ကငျဆာသုတသေန နဲ့ ကငျဆာဝဒေနာရှငျမြားကို ထောကျပံ့နနေိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ သူစှမျးဆောငျခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုအသီးအပှငျ့တှကေိုတော့ လူငယျလေးဟာ မွငျတှေ့ မသှား လိုကျရရှာပါဘူး။
ကွိုးစားရငျ ဘာမဆိုဖွဈလာနိုငျတယျဆိုတာ လူတှကေို သိစခေငျြရုံလေးပါ။ အိပျမကျဆိုတာ ကွိုးစားပွီး လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောမှသာ ဖွဈလာနိုငျတဲ့အရာပါ။ ကြှနျတေျာ့လိုလူကတောငျ လုပျနိုငျသေးရငျ ခငျဗြားက ပိုလုပျနိုငျရမှာပေါ့။
© 2021 Barnyar Barnyar - NEW